Archive du 20200817
Fifandonana nahery vaika Dahalo 10 maty, zandary 3 naratra
Dahalo 10 maty, ary 7 no voasambotry ny zandarimariam-pirenena tany Beteva Ampanihy ao ny faran’ny herinandro teo vokatry ny fifandonana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany.
Vondrona Eoropeanina Tokony apetraka mazava ny laharampahamehan’ny fanjakana
Tontosa ny zoma 14 aogositra lasa teo ny fanatrehana ” ny fikaonan-doha politika andiany faha-8 eo amin` i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina teny amin` ny lapam-panjakana etsy Ambohitsorohatra.
Fetison Rakoto Andrianirina “Tena zava-dehibe ny tohana iraisam-pirenena”
Manohy ny ady amin’ny covid-19 i Madagasikara. Mivoatra hatrany ny valanaretina, kanefa somary mihena ny tranga mitaha ny tamin’ny herinandro lasa, raha jerena amin’ny antontan’isa ofisialy.
Dany Rakotoson « Mampatahotra fa miha tsy mankato mpitondra ny vahoaka »
Efa tara ny famahana ny fihibohana saingy hisaorana aloha fa mba efa nisy an’izay, hoy ny mpandraharaha sy mpandinika raharaham-pirenena, Dany Rakotoson.
Vondrona eoropeanina “Mila fanavaozana ny fanaovana fifidianana eto”
Nisy fifampidinihana teo amin’ny fanjakana Malagasy sy ny vondrona eoropeanina namarana iny herinandro teo iny.
Antoko Vami “Hanao ahoana indray izany ny lanjan’ny diplaoma 2020 ?”
Mizotra any amin’ny lalan-dratsy ny firenena, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika, Vahoaka miray na Vami, Gaby Vakiniadiana.
Honoré Tsabotokay “Tsara havaozina ny INSTAT”
Ny Instat mihitsy no tena manao atsirambina adidy ankinina aminy ka tsy mahatanteraka izany, hoy ny depioten’i Vohipeno,
Filankevitry ny minisitry ny SADC Nodinihana ny fihaonana an-tampony sy ny fanarenana toekarena
Nandray anjara tamin` ny filankevitry ny minisitry ny SADC tamin` ny alalan` ny “visioconference” i Madagasikara ny 13 aogositra lasa teo.
Fampodiana Malagasy 230 no tonga teny Ivato omaly
Omaly dia Malagasy avy any Eoropa sy Afrika miisa 230 no nigadona teny amin`ny seranam-paiaramanidina Ivato. Marihana hatrany fa ny minisiteran` ny raharaham-bahiny no manapaka ireo Malagasy hampodiana.
Kitra Eoropeanina – Liga Mieritreritra handao ny Barça i Messi
Nambaran’ilay mpanao gazety Brezilianina Marcelo Bechler ao amin’ny gazety ara-panatanjahantena malaza Esporte Interativo, izay namoaka ny taona 2017 ny hialan’i Neymar ho an’ny amin’ny PSG
Sasatry ny mamono afo…
Sahirana tanteraka ny fitondram-panjakana ankehitriny eo anatrehan’ny trangan-javatra manala baraka ny mpitondra.
Fitaterana Hivory ny ATT sy ny mpitatitra ?
Misy ny loharanom-baovao mivoaka amin’izao fotoana izao, fa hisy fivoriana amin'ny 19 aogositra manomboka amin'ny 9 ora sy sasany ao amin'ny efitrano malalaky ny Cotisse Ambodivona.
Antananarivo Nampiseho ny heriny ireo taxi bisikileta
Nanao fitokonana teny Anosibe ireo mpitondra bisikileta an-jatony izay mitaky ny hamoahana ireo bisikileta nogiazan’ny mpitandro ny filaminana ny zoma lasa teo.
Fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra Ho mafimafy ny miandry ireo ray aman-dreny
Mahereza daholo ny Ray aman-dreny rehetra fa hiatrika sahady ny fidiran'ny mpianatra, hoy ny mpandraharaha sady raim-pianakaviana iray. Vola be no ilaina amin'io.
Fanadinam-panjakana CEPE Nihena ireo mpiadina hiatrika izany amin’ity taona ity
Mbola voatazona ny datin’ny 01 septambra fanambarana nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina hanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny Nosy amin’ity taona ity.
Minisiteran`ny fampianarana ambony Misy tsy mazava ny fomba fitantanana
Anisan` ireo nisedra olana vokatrin` ny aretina Covid 19 ihany ny mpianatra eto Madagasikara na ireo katikely na koa ireo eny anivon` ny anjerimanontolo. Ho fanampiana ho an` ireto farany dia nisy ny “cotisation”
Rafanomezantsoa Jean Nirina Hiala tsy ho filoha mpitantana ny FI.TRA.MA intsony
Anisan’ny nitana ny sain’ny maro sy niteraka resabe teto amintsika ny faran’ny herinandro teo ny olana nisy teo amin’ireo mpikambana sy mpitantana eo anivon’ny FI.TRA.MA izay niseho tamin’ny haino aman-jery mihitsy. Na izany aza anefa dia niravona sy nilamina ihany izany, raha araka ny fanambarana nataon-dRafanomezantsoa Jean Nirina.
Mpanadio ny lakan-dranon’andriantany 2 volana tsy nandray karama
80.000 Ar isam-bolana isan’olona no ambany indrindra amin’ny karaman’ireo mpanadio ny lakan-dranon’Andriantany hivarinan’ny rano maloto karamaina orinasa iray izay mpiara-miasa akaiky amin’ny APIPA.
Fividianana fitaovan’ny CCO Ahiana ho nisy kolikoly avo lenta
Niparitaka tany anaty tambazotran-tserasera nanomboka alin’ny zoma 14 aogositra lasa teo ny faktiora voalaza mahakasika ny fividianana fitaovana informatika ho an'ny ivontoeram-pibaikoana momba ny ady amin'ny Covid 19 na CCO Covid 19.
Coronavirus Tafiakatra 170 ny maty
Olona miisa 8 no lavon’ny covid-19 teto Madagasikara tao anatin’ny 72ora ka roa avy ny zoma sy sabotsy, ary 4 kosa omaly alahady, ka nampiakatra ny isa hatramin’izay ho 170.
Famokarana “CVO géllule” Tsisy tohiny intsony roa volana aty aoriana
Tsy re feo sy tsy re tsaika intsony hatreto ny tohin’ilay ozinina Pharmalagasy nambara fa hamokatra ny fanafody CVO+
Vanim-potoan’ny fahamehana Afaka manao tolo-barotra mivantana ny CCO
Tsy tratra antso ny Minisitry ny atitany rehefa saika hanaovana fanadihadiana mahakasika ilay raharaha fividianana fitaovana ho an’ny CCO Covid-19 mitentina 216 tapitrisa ariary,
Village Voara Andohatapenaka Nihena be ny olona manao fitiliana
Nihena ireo olona tonga manao fitiliana Covid 19 etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka amin’izao fotoana izao. Raha nahatratra 800 isan’andro izany teo aloha dia efa nihena 300 eo ho eo kosa ankehitriny.
Hopitaly Ambohibao Maherin’ny 40 ireo mararin` ny Covid 19 ao
nandalo tao aminy Isan` ireo hopitaly mandray ireo mararin` ny Covid 19 ny hopitaly loterana etsy Ambohibao (TPLA).
Ady amin’ny Coronavirus any Fandriana Naresaka ny tao Soanakambana-Vohitrambo
Nitohy tany amin’ny kaominina ambanivohitra Soanakambana-Vohitrambo ny fanentanana mikasika ny ady sy fanarahana fepetra hanalavirana ny coronavirus sy fanaterana ny bokin’ny mpianatra nataon’ny solombavambahoakan’i Fandriana sy ireo mpiara-miasa aminy tamin’ny herinandro lasa teo.